Homeसमाचारआइतबारका दिन यस्ता काम गर्नाले मिल्नेछ सफलता
November 1, 2020 admin समाचार 8630
शास्त्रले मानिस’को जीवन पद्धतिका वि’षयमा सवै जान’कारी दिएको हुन्छ । कुन दिन के काम गर्ने ? के गर्दा जी’वनमा सफलता मिल्छ ? के कस्ता काम गर्नुहुँदैन ? लगा’यतका यावत विषयमा धर्मशा’स्त्रमा सवि’स्तार वर्णन गरिएको पाइन्छ । जसले मानव जीव’नलाई संस्कारी बनाएको हुन्छ ।
आज आइतबार । ज्यो’तिष शास्त्रमा आइतबा’रका दिन केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नाले उसले सफलता पाउने उल्लेख ग’रिएको छ । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्य’मण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंग’लाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्य’मान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभा’वको अध्ययन र वि’श्लेषण गर्ने अद्वि’तीय विज्ञान हो ।
ज्योति’षशास्त्र वेदको आँखा’को रूपमा रहेको कुरा सर्व’विदितै छ । के तपाई कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्ने सो’चाइमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने दिन, बार, नक्षत्र र राशी सवै मिलाएर काम गर्दा तपा’ईलाई सफ’लता मिल्छ ।
मानिहरुले कुनै पनि शुभ’कार्य गर्दा दिन हेराएर मात्रै गर्ने गरेको पाइ’न्छ । हिन्दुधर्म शास्त्र अनुसार तपाईको खानपान, हिडडूल, कामको शुरुवात लगाय’तका विषय’हरुमा तपाईले बार र समय’लाई ख्याल गरेर यी काम गर्दा फाइदा पुग्छ। कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुपर्दा सवैभन्दा पहिले गणेशको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्यो’तिषशास्त्र अनुसार आइ’तबार के के काम गर्दा सफ’लता मिल्छ भन्ने बारेमा यहाँ प्रस्तु’त गरिएको छ ।
आइतबा’रका दिन राज्या’भिषेक गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, गीत, वाध्य, पला’किमा बस्ने, राजसेवा, औषधी नि’र्माण गर्ने, गाईगोरु किनबेच गर्ने, हवन गर्नाले लाभ हुने शास्त्र’मा उल्लेख गरिएको छ । शास्त्रानुसार आइत’बारका दिन सुन, तामा, उनी, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो बस्तुको कारो’बार गर्नु उप’युक्त मानिन्छ । -खबरहब बाट
October 9, 2020 admin समाचार 10176
October 16, 2020 admin समाचार 9086
June 15, 2021 admin समाचार 3220
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227563)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220489)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220305)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217429)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216450)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215144)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (213853)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213783)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182250)